Fanasana tongotra - Wikipedia
Manasa ny tongotry ny mpianany i Kristy, sary nataon' i Meister des Hausbuches, 1475 (Gemäldegalerie, Berlin)
Ny fanasan-tongotra dia fanao ara-pivavahana tanterahina ho fahatsiarovana ny nanasan' i Jesoa Kristy ny tongotr' ireo mpianany ny omalin' ny andro hijaliany, talohan' ny hiarahany miakafo amin' izy ireo. Amin' ny Alakamisy Masina no anatanterahana izany fomba izany hatramin' ny andron' ny Fiangonana voalohany ary izany dia nolovan' ny fiangonana kristiana hatra aty aoriana, afa-tsy ao amin' ny fiangonana prôtestanta sasany.
Ao amin' ny Vavao Mahafaly araka an' i Joany (Joa 13.1-17) no itantarana ny fanasan-tongotra nataon' i Jesoa an' ireo mpianany, ka izao no hafatra nataony momba izany:
"14Ka raha izaho Tompo sy Mpampianatra aza nanasa ny tongotrareo, hianareo samy hianareo koa dia tsy maintsy hifanasa tongotra; 15satria nomeko fianarana hianareo mba hanaovanareo toy ny nataoko taminareo. 16Lazaiko marina dia marina aminareo: Ny mpanompo tsy ambony noho ny tompony; na ny iraka tsy ambony noho izay naniraka azy. 17Raha fantatrareo izany, dia ho sambatra hianareo raha manao izany. " (Joa 13.14-17, Ny Baiboly Masina).
Tsy miresaka ny amin' ny fifanasan-tongotra ireo Filazantsara Sinôptika (Matio sy Marka ary Lioka).
Maro ireo fiangonana (isan' izany ny Anglikana, ny Loterana, ny Metôdista, ny Presbiteriana, ny Menônita ary ny Katôlika) manatanteraka fifanasan-tongotra amin' ny Alarobia Fanasan-tongotra na Alarobia Masina ao amin' ny Herinandro Masina. Misy koa ireo fiangonana izay manao ny fifanasana tongotra ho ôrdônansan'ny fiangonana, ka isan' izany ny Adventista, ny Anabatista, Baptista, ny Batista Afaka, ary ny Pentekôstista.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanasana_tongotra&oldid=1036916"
Voaova farany tamin'ny 31 Aogositra 2021 amin'ny 14:04 ity pejy ity.